Hogaamiyihii Kacdoonwadayaasha Bangaazi Oo Shihiiday. – Bogga Calamada.com
Hogaamiyihii Kacdoonwadayaasha Bangaazi Oo Shihiiday.
Wisaam bin Xamiid oo ahaa amiirkii golaha shuurada ee kacdoon wadayaasha Banqaazi ayaa la shaaciyay inuu ku geeriyooday dagaallada ka socoda wadanka Liibiya, una dhexeeya muslimiinta Liibiya iyo dagaal ooge Khaliifa Xaftar.
Istish-haadka Wisaam bin Xamiid waxaa ku dhawaaqay ehelkiisa oo ku sugan wadanka Turkiga, waxana shir jaraa’id qabtay nin la dhashey iyo hooyada dhashey Wisaam, kuwaas oo shaaca ka qaaday in wiilkooda oo ku dhintay dagaallo ka dhacay magaalada Banqaazi.
Wisaam bin Xamiid ayaa aad uga dhex muuqday kacdoon wadayaasha Banqaazi, waxaana mar uu ahaa amiirkooda, marar badan oo uu kasoo muuqday warbaahinta ayuu sheegi jiray iney wadi doonaan dagaalka illaa Liibiya ka xureeyaan, kuna soo dabaalaan xukun cadaalad ah oo ku dhisan Shareecada Islaamka.